Dingana ny 30 -06 Decembra 2015 – Zaza no iriako
Tafaverina ndray aho fa hanao famitinana ny zavatra niseho tamin’ny iny herindro lasa iny. Hoezahiko ampafatrina anareo oe Inona ndray zao hatao manaraka.
Alatsinainy 30 Novembra : Fitilina ny ra sy scan
Refa natao scan dia hita fa ilay havia mamokatra tsara noho ilay havanana.
Notohizana ny tsindrona Gonal F ka nampitomboina ho 255iu + Orgalutran
Talata 01 Decembra : Tsindrona Gonal F 225 iu + Orgalutran ,anelanela aminy 9 -10 alina
Alarobia 02 Decembra : Fitilina ny ra sy scan
Hita ihany fa tsy namokatra ilay havana ka hany ka notohizany hatrany ny tsindrona Gonal F 225iu + Orgalutran
Alakamisy 03 Decembra : Tsindrona Gonal F225iu + Orgalutran ,anelanelany amin’ny 9 – 10 ora alina
Zoma 4 Decembra : Fitilina ra sy scan
Nony natao ny scan dia hita fa mitombo tsara ary efa vonona halaina ireo atody reo,lay Tao amin’ilay ilany somary resiresy moa dia nitombo habe fa saingy vitsivitsy ihany no vonona ho esorina.
Refa notohizana lay scan dia nahitana endometrial polyp ndray teo lay tranon-jaza ,nefa hatramin’ny zay nanao scan dia madio be tsisy hotrizany teo. Olana vaovao ndray ty marina.
Mahazo fanafody vaovao aho ovidrell, izay hampiasaina ny sabotsy izao ka hiantso ny mpampivelona ny sabotsy hanome ireo torimarika
Fanampahakevitra ny dokotera : hoesorina reo atody reo aloha satria efa vonona dia ho congelena. Avy eo ndray mahita tohiny manaraka. Ary amin’ny alatsinainy izao no hiroso amin’ny “egg collection”.
Sabotsy 05 Decembra : Fitilina ra ndray,Tao anaty herinandro zaho naka ra in-dimy be zao.
Sabotsy 05 Decembra : 21 :45 tsindrona ovidrel 250ml eo amin’ny kibo.
Alatsinainy maraina 3:00 farany misakafo
Alatsinainy maraina 7:45 farany misotro rano
Alatsinainy marina 8:45 mitelina penadol miisa 3 ,miaraka amin’ny rano farakizay kely
Alatsinainy maraina 9:45 manomboka lay egg collectio
Fanampiny : tsy mahazo manao ranomanitra sy creme fa mandro amin’ny rano madio fotsiny ny marina lay egg collectionsatria lay egg dia “sensitive ”
Sary : Valisoa
Gonal F + Ovidrell
Ireto ny fanafody nampiasiko
Ity misy tantara kely niseho ny Zoma sy Sabotsy :
Nony tonga ny zoma hariva dia lasa nijery Krismasy parade izahy,hany ka dia sondrina loatra ka dia very ary ity finday,teo aho vao nikiropaka satria nilaza ilay mampivelona fa hiantso ahy hilaza torimarika rehetra hatao amin’ny ilay ovidrell. Ny andro efa tamin’ny 7 hariva ,efa mihidy mpivarotra finday mba hi recuperena ilay numero. Hany natao dia nividy finday teny mpivarotra tsotra, alina tontolo dia nametraka hafa amin’ny finday clinic mampilaza fa ity numeroko vaovao azahoana ahy,hay moa ka tsy mivoha sabotsy rizareo. Tampina ny domy,tsisy numero hafa azo aintsoana anilay clinic. Za zany amin’io tena efa mitomany mihitsiny satria inona ary zany no hatao,tao antsaiko dia hiantso “emergency number ” lay clinic.
Tonga ihany ny samedi tolakandro,vo recupere ihany lay numero,teo vao manotany teny sao de mba efa niantso rizareo sns… Eo ampivoahana anilay ivony tambazotra (zay nochargena tao lay mpivarotra phone),io fa misy numero miafina niantso, hay lay clinic , nanotaniko izy efa niantso ahy ve enao talohany izao fa vao izao ” vao izao za niantso ka!” .Hotrany oe nisy zavatra goana afaka zany tato amiko ,satria zaho tena efa kivy oe aona hicontacteny clinic ahy androny. Nazavaiko azy kely aloha zavanitranga sao de gaga izy amin’ny reo msg maro vorainy amin’ny alatsinainy. Hanazava hatao moa niantsony ka dia ireo nataoko eo ambony eo fanazavana
Zay ny azo aroso androny, dia asa na hanao aona io rampitso io fa aho atao dia tena matahotra mihitsiny,ny maso moa ndraindray adala dia tsimaintsy mijery any Dr Google sy Dr YouTube dia mahita fa farakizay maharary lay manao egg collection dia vao maika aho matahotra .
Refa tafarina tsara amin’ilay egg collection rampitso zaho dia milaza aminareo ndray inona ndray ny dingana vaovao.
Misaotra anareo mamaky hatrany sy mitafatafa ao msg miafina fa mahafinaritra fanohananareo.